10 SEO Tips For WordPress Websites Kubva Semalt
Kutsvaga injini kunongotarisa nezveimwe "tech tech" yakadai seal alt tags, mazita emafaira,uye keywords. Kunzwisisa kuti izvi "tech tech" zvinoshanda sei zvingaunza kubudirira kune bhizinesi, apo kusazvichengeta zvinogona kukurwisa iwe.
Unonzi Abgarian, Mutengi weKuteresi Achibudirira Semalt ,inopa mazano anokosha pamusoro pekucherechedza paIndaneti neShoko rako rePepanhau.
Nhauriro ndiyo yakanakisisa kugadzirisa. Kugadzirisa kunoshanda chete kana ichitsigirwazvichikwirirana nehupenyu hwakasiyana uye hunhu. Magwaro nemashoko makuru anosimudza musoro wepositi - koormusindeks rehvid pluss. Zviripo zvinofanira kutarisa kune mushanyi anoda uye kwete kutsvagainjini. Inofanirawo kuverengwa uye inonzwisisika.
Kuchinjana kumashure-hukama. Kana kugoverana uku kwaitwa zvakanaka uye hukama hunobva kunezvakakodzera, mahofisi makuru ehurumende anopa zvinhu zvakafanana newebsite yako, ichakupa zvikomborero zvikuru.
Kupa mazita akakodzera kumifananidzo mafaira. Kuratidza pamifananidzo yakakosha uyemagwaro ari mubhuku, Google inoratidza mhinduro dzose dzine chokuita navo zvichibva pamubvunzo wakaitwa. Zvinokurudzirwa kushandisa mazwi ekunyorazviri pasi mumufananidzo, uchiyeuka kushandisa arakiti yepaatti uye zvinyorwa zvinyorwa kuti uwedzere kuonekwa nekugadzirisa.
Pfupi permalinks dzinosanganisira keywords. Zvinonzwisisika permalinks zvinobatsirakubhizinesi. Pane permalink, chete mazwi mana okutanga akakodzera, sezvo Google inodzinga mazwi ose anotevera..
Tsvakurudzo yekutsvaga yakanyatsogadzirwa. Mamwe mazita ewebhuku anoshandisa kadhi yakawanda kwazvo kuti aumbekuve nekugadzirwa. Google inofanira kutamba kuburikidza nekodha yekodha yekudhara zvinyorwa zvakakosha. Izvo zvakaoma zvakanyanya purogiramu yacho, zvishoma pasizvinyorwa, uye keyword density retrieved. Kuita chinhu chinonyanya kukosha pakusarudza kutsvaga kutarisana, ndicho chikonzero chiitiko chinokurumidza kuita zvidzidzoiyo yeGoogle yebhizimisi.
Gadzira pepa remu XML format. Zvinowana nyore kuita basa iri kana uchishandisaGoogle Maps XML Sitemaps plugins. Zvimwe zvishandiswa zvinoshandiswa zvinosanganisira Website Optimizer uye Webmaster Central.
Ratidza zvinyorwa zvinodzidzisa kana mazwi ezvinyorwa. Mafunguro h1-h6 anobatsira kusimbisazvinyorwa, zvinyorwa, kana zvakakosha mharidzo pane imwe nyaya.
Social network posts. Kunyora mumagariro evanhu kunonzwisisika kwe SEO optimization.Kunyangwe iyo inokurudzira imwe kukosha kweSEO, zvinyorwa zvinofanira kuva zvakasiyana uye kwete zvebhizimisi chete. Ichakubatsira iwe kuvaka shanho hurupakati pako nevateereri vako
Kuchengetedza kubva kumusana wemaoko SEO maitiro. Zvinenge zvisingakwanisi kunyengedza Googleuye kushandisa girazi dema kana girazi mawe HTML, sezvo Google pakupedzisira ichavawana uye inotema chirango chakakura.
Kushanda pamwe nekambani yakarurama. Dzivisa kushandisa Flash sezvo isingaoneki kutsvagainjini uye panzvimbo, shandisa ShokoPress.
SEO inovandudza huwandu kana hutano hwemigwagwa kune webhusaiti yakapiwa. Tsvaga injini dzinobatsiramukuzadzikisa izvi kuburikidza nekufambisa motokari kuburikidza ne "chimiro" kana "zvisina kubhadhara" tsvaga yekutsvaga. Dzidziso yeiyi ndeyekuti yekare, kana yakakwirira nzvimboinowanikwa mumigumisiro yekutsvaga, nhamba yakakura yevashanyi ichawana.